प्रचण्ड वि’रुद्ध फेसबुकमा जथाभावी लेख्ने रेडियो नेपालका पत्रकार प’क्राउ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रचण्ड वि’रुद्ध फेसबुकमा जथाभावी लेख्ने रेडियो नेपालका पत्रकार प’क्राउ !
प्रचण्ड वि’रुद्ध फेसबुकमा जथाभावी लेख्ने रेडियो नेपालका पत्रकार प’क्राउ !
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको अ’भियोगमा प्रहरीले रेडियो नेपालका संचालक समिति सदस्यसमेत रहेका पत्रकार दिपक पाठकलाई प’क्राउ गरेको छ। आज बिहान केन्द्रीय साइवर ब्यूरोले पाठकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पत्रकार पाठकले नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सामाजिक सञ्जालमा आ’लोचना गरेको उ’जुरी परेपछि नियन्त्रणमा लिएको हो। पाठकलाई आज बिहान नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी निरज शाहीले जानकारी दिए।
उनीवि’रुद्ध हिजो जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट प’क्राउ पुर्जीको अनुमति लिएर प्रहरीले प’क्राउ गरेको हो। आज साइबर अ’परा’धमा म्याद थप्ने प्रहरीले तयारी गरेको छ। पाठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट पत्रकार मानिन्छन्।
कपिलवस्तुमा कोरोनाको आशंकामा आइसोलेसनमा भर्ना गरिएका एकको मृत्यु
आयो खुशीको खबर, मोरङमा एकैदिन ३९ जना कोरोना सङ्क्रमित उपचार पछि निको भएर घर फर्किए